Japanese Translator (For QA/QC Department) (Negotiable)
IIDA ELECTRONICS (MYANMAR) CO., LTD. (Electrical and electronic manufacturing)
Bachelor Degree or equivalent, optional certification or diploma.
Japanese language skill Level – N2 (Written and Verbal)
Related experience at least (3) Year in translator filed and factory field.
Flexibility to work and must be able to work rotating shift.
School Secretary (Chinese Language) (Negotiable)
Thai Translator For Marketing ( Urgent) (Negotiable)
Asia Starmar Transport Intelligent Co.,Ltd (Import and export)
- Thai Language must be speak fluently
- To plan marketing activities related to the Branding and Agency.
- To have good execution of the marketing activities. Marketing Channels (Online/Offline) Marketing Campaigns /Joint Promotions (i.e. Apps or other Media Platforms)/ BDM/Business Partnerships/ Promotion Campaigns
- To updateabusiness development plan while improving the knowledge of the market by type of client
- To contribute to the organization of promotional events and update market research studies
- To establish implement and roll out of the business development plan
- To perform activities from product strategic planning to customer analysis
Any graduate (Bachelor of Chinese is preferable)
Must be proficient in Thai language
Active, result-oriented, strong negotiation skills and highly disciplined
Must have good thai skills and MS office
ASTI was established under the laws and regulations of the Republic of the Union of Myanmar, headquartered in Yangon, and specialized in providing IT solution, operation and consultation services in the public transportation sector and smart city developments.
Must have Chinese4skill
Chinese Translator	(3 posts) (Negotiable)
Japanese Translator (Negotiable)
• Training ပိုင်းနှင့်ပတ်သတ်သည့် ကိစ္စ ရပ်များ Support ပေးနိုင်ရပါမည်။
• ရုံးပိုင်း နှင့် ပတ်သတ်၍ အတွေ့ကြုံရှိလျှင်ပိုအဆင်ပြေပါသည်။
• ရုံးပိုင်း Administration Task များ သိရှိနားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
• ဂျပန်စကားကို မြန်မာဘာသာဖြင့် အဆင်ပြေချော့မွေ့အောင် ပြန်ဆိုနိုင်ရမည်။
• အသက် (၂၂) မှ (၃၅) အတွင်း
• Japanese (N)2Level ရှိရမည်။
• လိုအပ်လျှင် ရုံးပိုင်း Administration Tasks များ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
• Training ပိုင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီး သင်ယူလိုစိတ်ရှိရမည်။
• လိုအပ်သည့် Training များ ကုမ္ပဏီမှ သင်ကြားပေးပါမည်။
• ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ပြီး Personality ကောင်းမွန်ရမည်။
• Computer (Microsoft Word, Powerpoitn, Excel, Email & Internet) ကျွမ်းကျင်ရမည်။
Content Writer (English Language) (Negotiable)
Position Title : Content Writer (English Language)
We are seekinga“Content Writer (English Language)” to join our team.
Translate Myanmar Content into English
Review, edit the content prior to publication on website
Monitor the content onaregular basis to determine which can drive users on the website
1 or2years Written working experience in publication or website or local Myanmar newspaper or journalism or magazine or advertising agency
BSc in English, Journalism, Marketing or related field
Myanmar Pou Chen Co.,Ltd (Apparel and fashion)
-တရုတ် ၊မြန်မာ ကျွမ်းကျင်စွာ ရေး၊ပြောနိုင်ရမည်။
-(YUFL)မှ တရုတ်ဘာသာစကားနှင့် ဘွဲ့ ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
-Chinese 4Skills (Fluently ) ရရှိရမည်။
-English Speaking အနည်းငယ်ပြောနိုင်ရမည်။
အမှတ်(၁၁၂/၁၂၁)အမှတ်(၄)လမ်းမကြီး သာဓုကန် စက်မူဇုန် ၊ ရွှေပြည်သာမြို့ နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ( ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းအရှေ့ )
ဖုန်း - 09-252670171/01-611213(ext-7991/7992)
Basic salary +3 plus allowance
arrange for room
3 meals (breakfast ,lunch,dinner)
Japanese Translator (2) Posts (Negotiable)
DIR-ACE Technology Ltd (Information technology and services)
Chinese Translator (Urgent) (Negotiable)
* Facilitate effective communication between two parties
* Reading documents and translate Myanmar from Chinese and Chinese from Myanmar
* Responsible for the daily translation work of the office
* Providing effective translation process
* Any Graduated
* Mature Candidate (Under 35 years)
* At Least (2) years’ experiences Translation/Interpreter fields.
* Must be expert translation and Interpretation Chinese to Myanmar, Myanmar to Chinese (written & verbal), English Preferred.
* Must be Chinese-Myanmar typing.
* Ability to priorities and work well under pressure.
* Have good presentation, organizing, negotiation, teamwork and problem solving skill.
* Skillful in the use of computer software and Microsoft Office Packages, particularly Word, Excel, PowerPoint and Outlook.
Allowance - Meal Allowance / Phone Allowance
Saturday / Sunday And Public Holiday off
(Every Year Salary Increase and promotion depends on
Chinese Written Translator (Negotiable)
- လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာများကို တရုတ်-မြန်မာ မြန်မာ-တရုတ် သို့ အရေးဘာသာပြန်ရမည်။
- တရုတ်စာနှင့် မြန်မာစာ လိုအပ်သလို ကွန်ပျူတာ ဖြင့်စာစီရမည်။
- အခြားအထက်လူကြီးများပေးအပ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလည်း လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်
- တရုတ်စာနှင့် မြန်မာစာ ကောင်းမွန်စွာ ဖတ်နိုင်၊ပြောနိုင်၊ရေးနိုင်(လက်ရေးဖြင့်)၊နားလည် နိုင်ရမည်။- တရုတ်မှ မြန်မာ စကားပြော နှင့် အရေး ကောင်းမွန်ပြေပြစ်စွာနှင့် အဓိပ္ပါယ် မှန်ကန်စွာ ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ရမည်။- မြန်မာမှ တရုတ် စကားပြော နှင့် အရေး ကောင်းမွန်ပြေပြစ်စွာနှင့် အဓိပ္ပါယ် မှန်ကန်စွာ ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ရမည်။- တရုတ်၊ မြန်မာကွန်ပျူတာ လက်ကွက် ကျွမ်းကျင်ရမည်။- အထက်တန်းအောင်(သို့)ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည်။- ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာဒုံ စက်မှုဇုံ တွင် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။အခြား အရည်အချင်းများ- အဖွဲ့အစည်း နှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်နိုင်သူ- အလုပ်ကြိုးစား ၍ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။- အချိန်တိကျပြီး တာဝန်ကျေပွန်သူဖြစ်ရမည်။လစာနှင့် အခြားခံစားခွင့်- နယ်မှလာသည့် စကားပြန်များအတွက် နေစရာနှင့် စားစရာ စီစဉ်ပေးမည်။- ရုံးအသွားအပြန်ဖယ်ရီ ကြို/ပို့ စီစဉ်ပေးသည်။- အလုပ်ချိန် တပတ်လျှင် တနလာင်္ မှ သောကြာနှင့် စနေ နေ့တဝက်- ကောင်းမွန်သည့် လစာ ပမာဏ ပေးသည်။- အချိန်ပိုဆင်းရလျှင် အချိန်ပိုကြေးခံစားရမည်။
Preschool Nursery Mentor Teacher (Negotiable)
Win Yadanar Bon Co.,Ltd IT, Hardware, & Software
• Any Graduates (or) B.Sc. (IC) (or) Bachelor Degree (UFL Chinese prefer)
• At least three years’ experience in Chinese Translator.
• Strong oral and communication skills and Chinese language fluency and adaptability to the diverse and difficult circumstances.
• Excellent Verbal/Written communication, strong negotiation.
• Speak, read and write fluently in Chinese languages.
• reporting directly to Director
• Fluent in customer relation.
• Can travel oversea/domestic anytime
• Can work under pressure and team work
• Proficiency in computer skill, E-mail and Microsoft skill
Chinese Verbal Translator (Negotiable)
EMC Manufacturing Limited IT, Hardware, & Software
- လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာ လုပ်ငန်းညွှန်ကြားချက်များ မေးခွန်းမေးမြန်းသည်များ ကို တရုတ်ဘာသာ မှ မြန်မာဘာသာ ၎င်း၊ မြန်မာဘာသာ မှ တရုတ်ဘာသာ ၎င်း သို့ အဓိပ္ပါယ်မှန်ကန်တိကျစွာ စကားပြောဖြင့် ဘာသာပြန်ပေးရမည်။
- အခြား အထက်လူကြီးများပေးအပ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလည်း လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
- တရုတ်စာ နှင့် မြန်မာစာ ကောင်းမွန်စွာ ဖတ်နိုင်၊ပြောနိုင်၊ရေးနိုင်(လက်ရေးဖြင့်)၊နားလည် နိုင်ရမည်။
- တရုတ် မှ မြန်မာ စကားပြော ကောင်းမွန်ပြေပြစ်စွာ နှင့် အဓိပ္ပါယ် မှန်ကန်စွာ ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ရမည်။
- မြန်မာမှ တရုတ် စကားပြော ကောင်းမွန်ပြေပြစ်စွာ နှင့် အဓိပ္ပါယ် မှန်ကန်စွာ ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ရမည်။
- အထက်တန်းအောင်(သို့)ဘွဲ့ရ ဖြစ်လျှင်ပိုအဆင်ပြေသည်။ သို့သော် နဝမတန်း အောင်မြင်သူ များလည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
- အလုပ်အတွေ့အကြုံရှိလျှင် ပိုမိုအဆင်ပြေသည်။ အလုပ်အတွေ့အကြုံ မရှိသူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
- ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာဒုံ စက်မှုဇုံ တွင် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
- အဖွဲ့အစည်း နှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်နိုင်သူ
- အလုပ်ကြိုးစား ၍ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
City Global Mark Services Co.,Ltd IT, Hardware, & Software
တရုတ်စကား ရေး၊ဖတ်၊ ပြော ကျွမ်းကျင်ရမည်။
Computer Word/ Excel / Internet / Email အသုံးပြုတတ်ရမည်။
အသက် ၂၀ မှ ၃၀ အတွင်း ဖြစ်ရမည် ။
Chinese Teacher - Weekday Part Time (Negotiable)
Monday & Wednesday / 5:00PM to 7:00PM